Powderan'ny Mica Powder, Powela Micazy kosmetika, Powder Micaide pearlescent - Huajing
Miorina amin'ny fanodinana tsara ny ores tsy metaly, ao anatin'izany ny mika voajanahary, mika sentetika, mineraly miasa sns.
Kilasy kosmetika - Vovon-tany Mica Muscovite voajanahary
Kilasy fandrakofana - Powder Phlogopite Mica
Kilasy fananganana indostrialy - vovoka Mica kalkula
Kilasy plastika - Powder Mica synthetic
Kilasy plastika - Phlogopite Mica Powder
Lingshou Huajing Mica Co., Ltd., natsangana tamin'ny taona 1994, dia manana tantaram-piainana 27 taona hatreto. Izy io dia orinasa miompana amin'ny famokarana mazàna amin'ny fanodinana be dia be ny metaly tsy metaly anisan'izany ny mika voajanahary, mika sentetika, mineraly miasa sns sns. Huajing dia manome vahaolana manerantany mifototra amin'ny fampiharana mineraly avo lenta, fampiharana avo lenta, izay ahitan'ny mika famokarana andiana kilasy vovoka manontolo. Ny orinasa dia nametraka ivontoerana fikarohana sy fampandrosoana roa amin'ny sehatra samihafa, izay hanomezana fanohanana matanjaka ara-teknika ho an'ny famokarana indostrialy sy ny fitaovana fanatsarana tarehy.
Tsindrio raha hanadihady
Huajing dia manana ekipa matihanina misy mpikambana efa ho 100 natokana ho an'ny famokarana sy fanamboarana vokatra avo lenta avy amin'ny mika sy vokatra mineraly hafa.
Ny orinasa dia manaraka ny paikadin'ny fampandrosoana avo lenta sy maharitra ary mandray ny fanavaozana ara-tsiansa sy ara-teknolojia ho fifaninanana ifotony.
Ny orinasa dia manana ivon-toerana R&D roa amin'ny sehatra samihafa hanomezana fanampiana ara-teknika matanjaka amin'ny famokarana indostrialy sy ny kosmetika fitaovana fototra.
Amin'ny famokarana mika sentetika, ny fampiharana ny mineraly miasa dia manana tombony ara-teknika lehibe.
Fitaovana sy palitao fananganana
Ny vaovao farany momba ny vaovaontsika
Huajing dia manaraka ny hevitry ny rafitra fitantanana mandroso
Ny fitantanana ny ozinina dia mifanaraka amin'ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001: 2015, ISO14001: 2015 ...
Ny marina momba ny enviro ...
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia nisy fanavaozana be dia be nitranga teo amin'ny sehatry ny hatsaran-tarehy maitso. Tsy vitan'ny fidirana amin'ny safidy marobe amin'ny fikolokoloana ny hoditra madio sy tsy misy poizina, fikolokoloana volo ary kosmetika, fa hitantsika koa ny marika manova ny fifantohany amin'ny famoronana vokatra maharitra sy fonosana ...
Ny tatitra fikarohana farany navoakan'i MarketsandResearch.biz dia maminavina ny tsenan'ny mika manerantany amin'ny mpamokatra, faritra, karazany ary fampiharana amin'ny 2020. Izy io no fikarohana farany hatramin'ny 2026 ary manome ny mety ho fampahalalana rehetra momba ny tsena sy ny fotoana mety eo amin'ny tsena manerantany. Direction de ...
Fampandrosoana sy fampiharana ...
Ny Mica dia anaran'ny ankapobeny an'ny mineraly silicate misy sosona, miaraka amin'ny toetran'ny insulation, mangarahara, fanoherana ny hafanana, fanoherana ny harafesina, fisarahana mora sy fanalana ary feno elitika. Ampiasaina be amin'ny kosmetika, plastika, fingotra, firakotra, harafesina ...